को हुन् यी व्यक्ति ? जसलाई मार्न दुश्मनले २५ अर्ब खर्च गरेका थिए – Medianp
को हुन् यी व्यक्ति ? जसलाई मार्न दुश्मनले २५ अर्ब खर्च गरेका थिए
मिडिया एनपी एनपीप्रकाशित मिति: आइतबार, कार्तिक १८, २०७५१३:५१0
एजेन्सी,१८ कात्तिक । विश्वका सबैभन्दा खुंखार ड्रग मफिया पाब्लो एस्कोबरलाई मार्न दुश्मनले २५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको रकम खर्च गरेको उनकी श्रीमती बताएकी छन् । करिब २ दशक अगाडी भएको उक्त घटनामा पाब्लोले संसारभर अन्डरबल्ड ड्रग माफियाको रुपमा चिनिएका थिए ।
उनी विश्वकै धनि र खतरनाक डज्ञग माफिया थिए जसको कारण उनलाई प्रहरीले इन्काउन्टर गरेर मारेको थियो । उनी यति धनि थिए की उनको करोडौँ रुपैयाँ रकम मुसाले खान्थ्यो भने अर्बौ रुपैयाँ राखेको ठाउँमा पानीको कारण काम नलाग्ने बन्थ्यो । उनको भाइ रबोर्ट एस्कोबारको भनाइअनुासर पाब्लो एक दिनमा नै १५ टन कोनिकको तस्करी गर्थे । उनी विश्वकै सातौँ धन ब्यक्ति थिए । उनको निजि सम्पति मात्रै करिब ३० विलियन अर्थात ३० खर्ब रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
उनको विलासी गाडी र घरहरुको त कुरै नगरौँ । पाब्लोले आफ्नो व्यापार बाट बार्षिक रुपमा मुनाफ मात्रै १ लाख २६ हजवार करोड रुपैयाँ जति रहेको उनकी श्रीमतीको दाबी रहेको छ । उनी ज्ञ वर्षमा २ लाख रुपौयाँ त नोटको गड्डी बाँध्नको लागि नै खर्च गर्थे । उनले कोलम्बियाको राजनितीमा समेत प्रवेश गर्ने प्रयास गरेका थिए जसको लागि पाब्लोले देशको १० बिलियन डलरको राष्टिय ऋण तिर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । तर पाब्लो कोलम्बिया सरकार र अमेरिकाको ठूलो दुश्मन थिए । यद्यपी पाब्लेले भगवानको रुपमा मान्ने गर्थे । उनले कयौँ चर्चहरु निर्माण गरिदिएका थिए ।
पाब्लोले २५ वर्षिय किशोरी मारिया भिक्टारियासँग विवाह गरेका थिए उनीहरुको दुई सन्तान समेत थिए । उनले ५ हजार एकड क्षेत्रफलमा हेसिएन्दा नेपोलस नामको सुविधासम्पन्न स्टेट तयार गरेका थिए, जहाँ उनको परिवार बस्दे आएका थिए । उनले ग्रीक शैलीमा किल्लाको निर्माण कार्य शुरु गरेका थिए तर हत्या भएपछि यो कार्य सम्पन्न हुन पाएन् । त्यसपछि पाब्लोको जमित, चिडियाघर र किल्लालाई कब्जामा लिएर सरकारले गरिब नागरिकलाई बाडेको थियो ।
आफ्नै बाबुले पटकपटक बलात्कार गर्दा ज्यान गयो १० वर्षीया बालिकाको